Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Cilmaaniyiintii Turkiga oo loo quusgooyay Sadex kun oo askari oo xabsi la dhigay iyo Dhimashada oo 265 maraysa..
Cilmaaniyiintii Turkiga oo loo quusgooyay Sadex kun oo askari oo xabsi la dhigay iyo Dhimashada oo 265 maraysa..
Jul 16, 2016 SOMALI NEWS 0
<> Isku day afgambi ayaa xalay turkiga ka dhacay milatarigu waxay la wareegeen goobo muhiim ah,sida idaacadii,madaarkii Istambul, biriijyada waaweyna way xidheen.Waxay afduubeen taliyihii ciidamada mariniska.
Kadib markii xukumada turkigu ka badbaaday isku day afgambi oo ay horkacayeen saraakìil cilmaaniyin ah oo diidan kor u qaadista fahanka diinta islaamka waxa xabsiga laga buuxiyay askartii inqilaabka ka qeybgashay oo illaa hadda gacanta lagu dhigay 3000 sadex kun.
Dadweynaha Turkiga ayaa diiday in dalkooda lagu celiyo xaalado dhaqaale xumo iyo shaqo la’aan ah oo uu Erdogan xisbigiisu kala soo dabaashay.Iyagoo kaarayaashii isku dhigay milarigiina u diiday inay xukunkooda u hogaansamaan kadib markii madaxweyne Erdogan ugu baaqay inay isugu soo baxaan wadooyinka.
Dhanka kale ciidamada sida gaarka ah utaba-baran, kuwa bada iyo inta badan ciidanka cirka ayaa talaabadan ka biyo diiday iyagoo guutoyinkii afgambiga waday dagaal fool-ka fool ah la galay ugu dambayntiina ka fara-maroojiyay xarumihii idaacadaha iyo madaaradii ay ku habsadeen markii u horaysayba.
Dhimashada rabshadii xalay inta la xaqiijiyay waxay maraysaa 2651 ruux oo 104 ka mid ahi yihiin askartii inqilabka waday,161 rayad, dhaawacuna 1440 qof.
M\_weyne Erdogan wuxu saaka ka degay madaarka caalamiga ah ee Ataturki ee magalada Istambul, halkaas oo uu ka jeediyay Khudbad taariikhi ah oo uu ku bilaabay bilowga suuradda INNAA FATAX.
Arimaha xiisaha leh waxay ahaayeen siyaasiyinta mucaaradka oo laftoodu diiday talaabada milatariga.
siyaasada Yurubta kibirsan iyo Erdogan oo is diidan iyo sida ayna usoo dhaweynin talaabada Milatarigu qaaday iyo M.weyne Obama oo isaguna dhankiisa ku baaqay in dimuqraadiyada la dhawro.
Sikastaba ha ahaatee Yurub reer galbeedku ma rabaan wadan islaam ah oo siyaasada caalamka saamayn ku leh,balse wakhti xaadirkan waxay dani igu jirtaa xukuumada Erdogan oo ka xakamaysay qaxootigii ku qulqulayay.
Cilmaaniyiintii Turkiga, Dadweynaha Turkiga, dagaal, shaqo
Maxaa sabab u ahaa fashilka inqilaabkii milatari ee Turkiga Afgambigii Turkiga oo dhicisoobay kooxdii inqilaabka isku dayday oo laga adkaaday iyo Erdogan oo Istanbul ka daadegaya